चर्चित अभिनेतृ रेखा थापा काठमाडौंको उपमेयर, अरु को -को कहाँबाट लड्दै ? (सूचिसहित)::त्रिशुलीखवर
चर्चित अभिनेतृ रेखा थापा काठमाडौंको उपमेयर, अरु को -को कहाँबाट लड्दै ? (सूचिसहित)
एकीकरण पछि स्थानिय निर्वाचन मार्फत संगठन सुद्रिढिकरणमा जोड दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उमेदवार छनौटको तयारी गरिरहेको छ । चुनावी तालमेलका लागि अन्य दलहरुसँग छलफल जारी राखेको राप्रपाले सकेसम्म निर्वाचन हुने सबै स्थानमा पार्टीका उमेदवार उठाउने भएको छ ।
राप्रपा काठमाण्डौं अध्यक्ष नवराज शिखडाका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा पार्टीका पूर्व प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठ उमेदवार बनेका छन् भने चर्चित अभिनेतृ रेखाथापा महानगरपालिकाको उपमेयरमा उमेदवार बन्ने भएकी छन् । केही समय अघि भएको पार्टी महाधिबेशनमा थापा राप्रपा केन्दिय सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिईन । श्रेष्ठ दोस्रो संविधानसभा चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार थिए ।
काठमाण्डौंको शंखरापुरा नगरपालिकाको मेयरमा गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ, रमेश नापित, उपमेयरमा बेली तामाङ्ग र लक्ष्मी थापाको नाम चर्चामा छ । काठमाण्डौंको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको मेयरमा शम्भू थापा र नवराज दाहालको नाम चर्चामा रहेको छ भने उपमेयरमा अन्जु केसी र कृष्णा नगरकोटी मध्ये एक जना उठ्ने छन् ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरमा नवीन खड्का, सन्तोष अधिकारी र सानुकान्छा श्रेष्ठको चर्चा छ भने उपमेयरमा गिता रिजाल मध्ये एकजना उमेदवार बन्ने छन् । टोखा नगरपालिकाको मेयरमा प्रेम पसाद दुलाल र सुरज पाण्डे मध्ये एकजना उठ्ने छन् ।
तारकेश्वर नगरपालिकाको मेयरमा राज कुमार थापा, कपुर लामा, केदार फुयाल मध्ये एकजना उमेदवार बन्ने छन् भने त्यहाँ मिरा महर्जन उपमेयरको उमेदवार बन्ने छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको मेयरमा उद्धव था र उपमेयरमा निरा खनाल, आशा लामा र रामहरी जोशी मध्ये एकजना उमेदवार बन्ने छन् । चन्दागिरी नगरपालिकाको मेयरमा मदन थापा मगर, पकाश थापा र मिलेन्द्र प्रधान मध्येएकजना उमेदवार बन्ने छन् । किर्तिपुर नगरपालिकाको मेयरमा शिबराम थापा, जित बहादुर श्रेष्ठ र प्रमोद नापित मध्ये एकजना उमेदवार बन्ने छन् । त्यस्तै दक्षिणकाली नगरपालिकाको मेयरमा श्याम बस्नेत र रुपा बलामी मध्ये एकजना उमेदवार बन्ने छन् ।
यता भक्तपुरमा राप्रपाले तालमेलको नितिलाइ प्राथमितामा राखेको जिल्ला अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । तालमेल नभएमा राप्रपाले भ क्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको मेयरमा रविन्द्र प्रताप शाह, माधव खत्री र धन बहादुर लामा मध्ये एक, सुर्य विनायक नगरपालिकाको मेयरमा रामेश्वर थापा, नारायण थापा,र रवि ढुगेल मध्ये एक , मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको मेयरमा नर गोविन्द शखदेव वा भूवानावाजा श्रेष्ठ मध्ये एक र भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा रविकृष्ण श्रेष्ठलाई उठाउने भएको छ